Fiarovana amin'ny tamba-jotra ataon'ny governemanta amin'ny alàlan'ny fakan-tsarimihetsika fanao amin'ny vatana | Vahaolana OMG
Fiarovana amin'ny tamba-jotra ataon'ny governemanta amin'ny alàlan'ny fakan-tsary amin'ny fakan-tsary vita amin'ny vatana
Miaraka amin'ny fitomboan'ny ahiahy momba ny fandriam-pahalemana dia nanjary zava-dehibe amin'ny governemanta ny fanaraha-maso ny tanàna. “Fanamafisana ny lalàna OMG - Fakan-tsary mitafy vatana (DVR / WIFI / 3G / 4G) / Digital Evidence Management - Singapore” dia manome fanampiana ireo polisy, polisy misahana ny fifamoivoizana, fitantanana fadin-tseranana, miaramila ary mpiambina ny governemanta amin'ny fiarovana mahomby kokoa ireo tanàna miaraka amin'ny haitao biometrika vaovao.
Mba hitantanana ny rafitra fiarovana biometric security dia afaka apetraka amin'ny toerana voafaritra sy manara-maso ny fizotry ny olona manerana ny sisintany. Tafiditra ao anatin'izany ireo teknolojia fifindra-monina, fivoahana ary fidirana amin'ireo rafitra fanaraha-maso fidirana amin'ny fidirana, ary ny fanapariahana angon-drakitra nasionaly. Mila kojakoja azo antoka ihany koa ny governemanta mba hampitana fifandraisana lehibe eo amin'ny departemanta misy azy ireo. Na manome torolalana amin'ny departemanta diplaomatika azy ireo na tompon'andraikitra amin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny governemanta. Miankina amin'ny fanaraha-maso mahomby izy ireo mba hahazoana antoka azo antoka sy azo antoka amin'ny birao foibe. Rehefa miditra amina raharaha mampiady hevitra ny polisy, te hahafantatra ny mombamomba ny vondrom-piarahamonina sy ny fampahalalam-baovao raha misy faktiora BWC amin'ilay tranga, ary raha tsy nametraka BWC ny sampana dia tadiavin'ny mpikambana ao amin'ny vondron'olona ny antony.
Ny fakantsary horonantsary vita vatana dia fitaovana sarobidy izay azon'ny mpampihatra lalàna manara-maso ny fijanonana fifamoivoizana, fisamborana, fitsapana fahatsiarovana, ary dinidinika. Ny rafitra fakantsary horonan-tsary vita amin'ny vatana matetika dia misy fakantsary, mikrô, bateria ary fitahirizana data. Namboarina ho apetraka amin'ny loha na atao amin'ny toerana isan-karazany eo amin'ny vatana, miankina amin'ny modely.
Miaina ao anatin'ny vanim-potoana maodim-pamokarana fitaovana namboarina, ny karazana fitaovam-piadiana farany vao nivadika ho filana lehibe hananana antoka amin'ny fiarovana sy ny fahasalamana ara-tsosialy. Ny fakan-tsary miakanjo vatana dia gadget kely izay azon'ny olona anaovana kapaoty na am-paosiny raha misy kosa ny sasany manana ahina mahafinaritra. Ny olona iray koa dia afaka manamboatra azy io amin'ny satroka fiarovana na amin'ny fitaratra. Ny bateria an'io gadra mandroso io dia mitohy mihoatra ny ora 6 mankany 8 miaraka amin'ny kaonty tena tsara. Afaka mirakitra rakitsoratra koa izy io amin'ny ora hariva na amin'ny maizimaizina. Iaraha-mahalala manokana izany ho an'ny mpiambina.
Mandritra ny vao haingana roa taona, dia hita fa mazava be ny nahita ny firoboroboana ny fampiasana ny tranonkala. Noho izany, amin'izao vanimpotoana ankehitriny izao, misy afaka misalasala mamindra horonantsary horonantsary amin'ny sehatra maro ary manomboka mandefa mivantana mivantana. Tamin'io fomba io dia nanjary rafitra arovana ho an'ny Governemanta ny fakantsary fitafy vatana sy ny tombony sy ny fatiantoka. Rehefa miresaka momba ny filaminana sy ny fahasalamana isika dia maneno lakolosy ny manampahefana mpiambina na mpiasan'ny polisy. Betsaka ny governemanta fanjakana no nanao adidy amin'ny polisy sy mpiasan'ny mpitandro ny filaminana hanao fakan-tsary miakanjo. Ity fanavaozana farany indrindra ity dia manome hery azy ireo hitory izay mety hitranga amin'ny sehatra ratsy na amin'ny tranga rehetra, mandritra ny fifanakalozan-kevitra mahazatra aorian'ny fampitandremana fiarovana. Io dia tena mahasoa hanitarana ny fahitàna tahaka ny fahatsoram-po amin'ny fitantanana ny hadisoana sy ny fitandremana fiarovana.
Aoka ho toy ny mety, ny asa ho an'ny fakan-tsary mitaky vatam-paty dia eo amin'ny sehatra an-tery azy, na izany aza dia mihena tsikelikely ho lasa fitaovana faneva ao amin'ny Departemantan'ny polisy sy akanjo ho an'ny Manambonin'ny polisy manerana ny firenena. Nisy raharaha vitsivitsy nalaza dia nitondra izany fanavaozana izany teo amin'ny toerana teo aloha ary nanitatra ny fiparitahany. Ny fakantsary vita amin'ny vatana ankehitriny dia lasa endrika hafa amin'ny tambajotra takian'ny lalàna. Ny biraon'ny manam-pahefana dia manatona miaraka amin'ireo tetik'asa fanadinana mba hanombanana ny fampiasana azy.
Ny fampiasana amin'ireo fakan-tsary miakanjoam-batana dia mamaritra ny mahitsy sy ny fandraisana andraikitra ataon'ny polisy. Ny fandinihana natao dia nanaporofo fa ny fanatsarana dia tonga amin'ny fomba maoderina sy fitondran'ny polisy amin'ny fakan-tsary mifono vatana. Mampivelatra ny fahavononan'ny polisy izany. Mahatadidy kokoa ny hetsika sy ny fiaraha-miasa amin'izy ireo amin'ny vahoaka manontolo izy ireo ary tsy mifanalavitra loatra izy ireo raha tsy mifanalavitra eo amin'ny fampiasana ny fahefana manan-danja amin'ny fitazonana ny ahiahy sy ny fanararaotana feno fahefana.
Concentrates avy amin'ny loharanom-baovao isan-karazany dia naneho fa rehefa mahatsapa tena ny olona fa ambany ny fandinihana dia hiova ny fitondran-tenany. Rehefa mahita ny tenany eo ambanin'ny fanaraha-maso sy ny fandraisam-peo fakantsary volo amin'ny vatana izy ireo dia lasa mpankato hatrany ary manova ny fiaraha-miasa amin'izy ireo amin'ilay olona manao feo. Ny porofo voaangona dia mampiseho fa ny olona, ​​izay mahalala ny fomba fijerin'ny mason'ilay fakantsary azy ireo, dia mahatakatra ny fihetsik'izy ireo amin'ny ankapobeny na mandray tsara indrindra raha toa ka singa mitazona mahazatra ny mpijery. Misy fotoana vitsivitsy amin'ny asan'ny tompon'andraikitra iray raha toa ka tsy mitovy ny fahasamihafan'ilay olona azon'izy ireo sy ny mpitarika asehon'izy ireo an-tsehatra rehefa mivory any amin'ny tribonaly izy ireo alohan'ny. Ilay mpamaly olona manao fitafiana manam-pahaizana izay miresaka tsara dia samy hafa be noho ilay mpanome zava-mahamamo izay nifandray tamin'ny ady ary notehirizina ho an'ny bateria. Hitan'ny manampahaizana manokana fa rehefa mahita ny fandraketana horonantsary ny fitsarana dia ho tena hafakely. Mampiahiahy ny mody any amin'ny fitsarana ny mahita olona mamaly manao akanjo manao fanamiana miaraka amin'ny fitarihana any an-danitra izay tsy mitovy amin'ny olona voasambotra. Amin'ny alàlan'ny fampiasana fakan-tsary hisamborana ny toetra amam-panahin'ilay olona sy ny fisainany dia mety ilaina raha oharina amin'ny mialoha.
miaraka Ny fanitsiana fitondran-tena azo eritreretina, ny tombony hafa azo raisina amin'ny fakantsary mitafy vatana ho an'ny fikambanana dia mihena ny fanoherana zanatany ary ny fampiasana ofisialy ny fitrangan-kery. Tamin'ny taona 2012, ny sampan-draharahan'ny polisy City of Rialto, nifandray tamin'ny University of Cambridge, Royaume-Uni, dia nitarika tatitra iray maharitra an-taonany momba ny vokatra sy ny vokatr'ireo polisy nanao fakan-tsary. Herintaona mahery, ny hetsiky ny fiambenana hafa dia nomena fakantsary fa ny hafa kosa tsy azo. Ny famotopotorana dia ohatra iray mora azo tamin'ny fihetsehana isan-karazany tamin'ny fotoana maro samihafa hanaovana ilay fanadinana. Taorian'ny fotoana naharitra dia nanaitra ny vokatra. Ny fivoriana izay nizara fakan-tsary ho an'ny vatana dia nampihena ny fampiasana herinaratra tamin'ny 60% tamin'ny taona teo aloha. Ny fanadinana dia nanambara ihany koa fa ny fitarainana teratany momba io fanangonana azo oharina io dia nihena 88% noho ny fanapahan-kevitra tamin'ny taona teo aloha. Ny Lehiben'ny Polisy Rialto dia nanambara ny fihenan'ny isan'ny fitarainana dia noho ny fanaovan'ireo tompon'andraikitra tsara kokoa na ny fihetsiky ny mponina tsara kokoa, azo inoana fa tadin'izy roa ireo.
Amin'ny hafa famotopotorana amin'ny fakan-tsary miorina amin'ny rafi-batana azo antoka ary ny fomba hampihenana ny fitomaniana ny teratany voajanahary, ny Departemantan'ny polisy Mesa dia nitatitra tatitra iray isan-taona indrindra fa mifantoka amin'ny fihenan'ny alahelo. Ny fandaharan'asan'ny fitsapana dia nahitana fihaonana roa; Mpikambana 50 fiambenana manana fakantsary vatana voatendry ary 50 tsy misy fakantsary vatana. Izy roa ireo dia samy nitovitovy tamin'ny adidin'ny fiambenana sy ny socioeconomics. Ny fizahana, narahina ho ekipa niaraka tamin'ny University of Arizona, dia namintina fa ny tompon'andraikitra tsy mijery fakan-tsary dia matetika no nanao fihetsiketsehana mponina. Fanampin'izay, ny fanadihadiana ihany koa dia nanatsoaka hevitra fa ny tompon'andraikitra fiambenana izay mitondra ny fakantsary manana vatana dia misy fihenan'ny 75% amin'ny fampiasana ny fimenomenona ary ny fihenan'ny 40% tamin'ny fanoherana natoraly nanomboka tamin'ny taona teo aloha izay tsy nisy ny fakantsary. ampiasaina.
Ireo fizahana roa nampiseho fa ny fakan-tsary mitafy vatan'ny vatana ho an'ny governemanta manoloana ny zava-misy fa ny vokatra mahavariana dia mampiseho fa ny fakan-tsary mitafy vatana dia mampihena ny fanoherana ny mponina. Izany dia antenaina amin'ny fetra voafetra hitarika ny roa tonta tsy hihaino ny fisian'ilay fizarana voarakitra. Ny Lehiben'ny Polisy ao Greensboro Ken Miller dia nilaza fa miangavy ny tompon'andraikitra izahay hilaza amin'ny olona fa manao feo izy ireo satria mieritreritra fa manainga fihetsika amin'ny lafiny roa amin'ny fakantsary.
Video recording avy amin'ny tompon'andraikitra mampiasa fakan-tsary mitafy vatana dia azo ampiasaina ihany koa hamahana ny olana anatiny ao amin'ny birao. Inona koa, fitaovana fanomanana sarobidy io. Nandritra ny fanadihadiana tsy tapaka nataon'ny Lehiben'ny Polisy manerana ny firenena momba ny fampiasana horonantsary fakantsary vatan'ny vatana, ny 94% amin'ireo namaly dia naneho fa ampiasain'ny filoham-pirenena izany hanaovana fanadihadiana amin'ny fitondran-tena ofisialy na ho fitaovana fanomanana. Ny horonan-tsary fakan-tsary amin'ny vatana dia manana refy lehibe amin'ny fanomanana modely. Mandritra ny fizahana horonantsary, ny mpitantana dia afaka manombana ny paikady ankehitriny ary misafidy raha tokony hatao miankina amin'ny traikefa ofisialy tena izy ny fanovana. Ny biraon'ny fanomanana dia afaka mamorona toe-javatra sasantsasany hiomanana amin'ny tompon'andraikitra miankina amin'ny fitondra-tena. Ankoatr'izay, ny fanomanana ofisialy izao dia ho azo antoka tsara amin'ny biraon'ny tsirairay na ao anatin'ny fizarana.
Mety ho izany ny toerana tiana indrindra apetraka amin'ny fampiharana ny lalàna dia ny manamarina sy manamarina ny fanadinana heloka bevava. Indray mandeha indray, fitaovana iray hafa fotsiny izy io izay afaka manampy amin'ny fampiroboroboana mialoha ireo mpandika lalàna. Tamin'ny fotoana namalian'ny tompon'andraikitra ny toe-javatra tsy nety natao dia ny fiarovana ny sehatra sy ny fanampiana ireo olona iharan-doza amin'ny fepetra fanampiana ara-pahasalamana. Rehefa nanomboka ny fivorian'izy ireo izy ireo ary nanandrana nanangona ny zava-nitranga dia sarotra ny mieritreritra ny tsirairay amin'ireo zava-miafina. Amin'ny alàlan'ny fampiasana fakan-tsary mitafy vatana, azon'ilay tompon'andraikitra atao ny manoratra ny seho sy ireo subtleties fotoana maro mety tsy ho hita. Rehefa mandehandeha manodidina ny toerana tsy nety izy ireo dia noraketin'izy ireo tahaka ny tamin'ny valiny voalohany. Ity fitaovana ity dia afaka manome data marobe amin'ireo tompon'andraikitra izay matetika miseho tsara rehefa afaka kelikely rehefa milamina fa tsy maika. Ny Lehiben'ny Polisy an'i Dalton dia nilaza fa tsy toy ny fakantsary anaty fiara velively, ny fakantsary mitafy vatana dia mirakitra ny zava-mitranga rehetra rehefa mihetsika ny tompon'andraikitra manodidina ny sehatra tsy mety ary mihaona amin'ny olona isan-karazany. Ireo fakantsary mitafy vatana dia tena sarobidy tokoa tamin'ny fitsimbinana angon-drakitra.
Manodidina Ireo mpanadinadinana dia omena hery fanampiny ary misarika am-pahavitrihana ireo fikambanana handray ity fanavaozana ity. Ny fananana rakitsary an-tsary aseho any amin'ny fitsarana dia mazàna azo antoka. Tao Kentucky, mpisolovava mpiambina ny manodidina iray no nihevitra momba ny fampiasana ny fanomezana horonantsary fakantsary volo. Izany dia mahatonga azy io ho tsotra kokoa ho azy ireo ny mahita ny teti-dratsy mety hampidi-doza mety ho tombony lehibe indrindra satria tsy mila filankevitry ny mpitsara ianao mahita an'io. Ity dia amin'ny ampahany manan-kery indrindra amin'ny toe-javatra feno herisetra ara-pianakaviana rehefa omena eo amin'ny tribonaly ny fanamafisana ny horonan-tsary. Raha ny mahazatra, indrindra raha misy ny sarisary fanararaotana ary mihorohoro ireo olona trandrahana dia aleon'izy ireo tsy miatrika fiampangana an-gazety. Ny fanamafisana ny raharaha ara-tsosialy dia tranga manahirana sy tsara indrindra. Miaraka amin'ireo maty tsy tra-boina sy vonjimaika dia natao ho an'ny tanjona rehetra tsy azo eritreretina.
Fiarovana amin'ny tamba-jotra ataon'ny governemanta amin'ny alàlan'ny fakan-tsary amin'ny fakan-tsary vita amin'ny vatana no farany niova: Desambra 3rd, 2019 by Admin
4430 Total Views 6 Views Today